Goob loogu talagalay Qaliinka
Meesha banaan ee fureyaasha waxaa lagu sameeyaa qaab dhismeedka alxanka birta. Tani guud ahaan waxay ku habboon tahay fureyaasha kubbadda oo leh cadaadis magac ka hooseeya ama u dhigma 5.0MPA (CLASS300). Nooca waalka noocan ahi waa miisaanka fudud oo godka gudaha waa fududahay in la farsameeyo, laakiin fiiro gaar ah waa in la siiyaa isku dubaridka feeraha qaabeynta si looga hortago in daloolka jirku uu xumaado. Birta dareeraha ah ee la shubay inta lagu gudajiro hawsha dusha sare ee biraha birta ah ee birta ah ayaa si xor ah u qulqulaya. Si loo hubiyo ...
Soosaarayaasha Kubadaha Hollow Valve
Maxaan sameynaa Xinzhan wuxuu diirada saarayaa soo saarida dhamaan noocyada kubadaha godan iyadoo la isticmaalayo waxyaabo badan oo kala duwan. Kubbadda Hollow waxaa sameeya saxanka birta lagu duubay ama garbasaarada birta aan birta lahayn. Kubbadda godan waxay yareyneysaa culeyska dusha sare iyo kursiga waalka sababtoo ah culeyskiisa oo fudud, kaas oo gacan ka geysanaya kordhinta nolosha adeegga kursiga waalka. Qaar ka mid ah cabbirro aad u ballaaran ama dhismo, kubbadda adagi waxqabad ma noqonayso. Kubadaha waalka Hollow sidoo kale ka dhigi kartaa nooca sabayn ama tr ...
Kubbadda godan waxay yareyneysaa culeyska dusha sare iyo kursiga waalka sababtoo ah culeyskiisa oo fudud, kaas oo gacan ka geysanaya kordhinta nolosha adeegga kursiga waalka. Qaar ka mid ah cabbirro aad u ballaaran ama wax dhisid, kubbadda adagi waxqabad ma noqonayso. Kubadaha waalka furan waxay sidoo kale sameyn karaan nooca sabayn ama nooca gogosha lagu rakibay, laba dariiqo ama nooca badan. Labada astaamood ee ugu muhiimsan kubbadaha waalka waa wareega iyo dusha sare. Wareegtada waa in la xakameeyaa gaar ahaan th ...
Warshadda Kubadda Kala-baxa ee Hollow
Kubadaha banaan ee ay sameeyaan saxanka birta ah ee la isku qurxiyo ama tuubooyin bir birta ah oo aan xuduud lahayn. Kubbadda godan waxay yareyneysaa culeyska dusha sare iyo kursiga waalka sababtoo ah culeyskiisa oo fudud, kaas oo gacan ka geysanaya kordhinta nolosha adeegga kursiga waalka.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Waxyaabaha Featured - Khariidadda bogga Soo , A350 Lf2 Madax Ball , L Nooca Madax Kubadaha , Qaabka L Madax Kubadaha , Kubadaha Waayo, Qaliinka , Ball Madax qaybo,